Sina Ny fihodinana faharoa amin'ny andiany fahatelo amin'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana dia natomboka! Faritany valo hiasa! mpanamboatra sy mpamatsy | Tianbang Fasteners
Loharano: Ministeran'ny tontolo iainana sy tontolo iainana, Tatitra tsy misy rano any Sina, tranokalan'ny Golden Spider 2021-04-08
Araka ny lalàna mifehy ny asan'ny mpanara-maso fiarovana ny tontolo iainana sy tontolo iainana, ny andiany faharoa amin'ny mpanara-maso fiarovana ny tontolo iainana sy tontolo iainana dia natomboka niaraka tamin'ny fankatoavan'ny Komity foibe antoko sy ny filankevi-panjakana. natsangana ho fiarovana ny tontolo iainana sy tontolo iainana ao amin'ny faritanin'i Shanxi, Liaoning, Anhui, Jiangxi, Henan, Hunan, Guangxi ary Yunnan ary faritra mizaka tena mandritra ny iray volana.
Ahoana no tokony hataon'ny orinasa fastener?
Nanomboka tamin'ny 1 aprily hatramin'ny 4 aprily, ny birao misahana ny tontolo iainana sy tontolo iainana Tangshan dia nitatitra fa 48 ny fanasaziana fanitsakitsahana tontolo iainana, miaraka amin'ny onitra 19,2 tapitrisa yuan. Noho izany, ny fanjakana ho fampiharana ny lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia hentitra, ka amin'ny maha orinasa iray, ahoana no hiatrehana ny fanaraha-maso ny tontolo iainana?
Ny ampahany amin'ny fanazavana dia hita ao amin'ny onitra an'i Tangshan:
1. Ny famokarana valiny vonjy taitra faharoa ho an'ny toetr'andro mandoto be dia tsy ampiharina
2. Fanodikodinana ny angon-drakitra fanaraha-maso an-tserasera
3. Tsy misy fandefasana entana voarindra ao amin'ny atrikasa
4. Tsy mahavita mametraka lisitra fitantanana fitantanana tontolo iainana ary mirakitra izany marina
5. Ny fiasa ara-dalàna ny fitaovana fanaraha-maso an-tserasera dia tsy azo antoka
6. Lany reraka
7. Ny zava-misy ankehitriny dia tsy mifanaraka amin'ny fisoratana anarana fahazoan-dàlana maloto
Raha fintinina, dia ny: fampiharana fitantanana tontolo iainana; fampiharana fanaraha-maso ny fandotoana; tsy misy lainga.
I. Fanarahan-dalàna ny tontolo iainana
* Na mifanaraka amin'ny politika indostrialy sy ny fidirana amin'ny indostria eo an-toerana izany, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanafoanana ny fahafahan'ny famokarana mihemotra;
* Na hangataka fahazoan-dàlana mivoaka amin'ny fandotoana araka ny lalàna sy ny fandotoana araka ny atin'ny fahazoan-dàlana;
* Raha feno ny fomba fandraisana ny fiarovana ny tontolo iainana;
* Na ny tetik'asa fananganana ny orinasa dia nahatanteraka ny lamina EIA sy ny "telo miaraka" mifanaraka amin'ny lalàna;
* Raha feno ny antontan-taratasy EIA sy ny fankatoavana EIA;
* Raha mifanaraka amin'ny atin'ny antontan-taratasy EIA ny toetoetran'ny orinasa: mifantoka amin'ny fanamarinana raha mifanaraka amin'ny EIA sy ny fankatoavana ny toetoetran'ny tetikasa, ny refy famokarana, ny toerana, ny teknolojia famokarana, ny toerana fanaraha-maso ny fandotoana, sns. antontan-taratasy;
* Raha manomboka ny fananganana ny tetikasa 5 taona aorian'ny fankatoavana ny EIA, raha tokony halefa indray ho fankatoavan'ny EIA.
Faharoa, fomba fiasa eken'ny fiarovana ny tontolo iainana
Ny fanekena ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fahavitan'ny tetik'asa fananganana dia ny fanamarinana sy fanekena ny fampiharana ny fisorohana ny fandotoana sy ny fanaraha-maso aroso ao amin'ny antontan-taratasy sy fankatoavana EIA. Ny antontan-taratasy sy ny fankatoavana dia tsy mitaky fananganana fotodrafitrasa fisorohana sy fanaraha-maso maloto maloto (tsy ankanavaka ny fotodrafitrasa vonjimaika mandritra ny vanim-potoana fananganana), tsy ilaina ny fanatanterahana ny fisorohana ny fako maloto sy ny fanaraha-maso ny fiarovana ny tontolo iainana. singa iray dia tokony hanome fanazavana mifanaraka amin'izany ao amin'ny tatitra fanekena ny fanaraha-maso ny fanekena tsy miankina.
Fanekena ny toeram-piarovana tontolo iainana ho an'ny loto amin'ny rano sy gazy:
Ny tobim-piarovana ny tontolo iainana ho an'ny loto amin'ny rano sy ny rivotra eo am-pananganana ny tetik'asa dia tokony hozahan'ny ekipa mpanao fananganana mihitsy.
Fanekena ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny fandotoana ny loto:
Alohan'ny hametrahana tetik'asa fanamboarana na fampiasana azy dia tsy maintsy arahana sy ekena ireo fotodrafitrasa hisorohana sy hifehezana ny fahalotoan'ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny fenitra sy fomba fanao notondroin'ny Fanjakana; raha tsy mahafeno ny fepetra takian'ny fanjakana izy io , ny tetikasa fananganana dia tsy azo apetraka amin'ny famokarana na fampiasana.
Araka ny Andininy 48 amin'ny lalànan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina momba ny fisorohana sy ny fifehezana ny fandotoana amin'ny tabataban'ny tontolo iainana (novaina tamin'ny taona 2018): Raha toa ka manitsakitsaka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-14 amin'ity lalàna ity dia anaovana tetikasa fananganana na ampiasaina raha tsy vita ny fotodrafitrasa fanampiana ho fisorohana sy fanaraha-maso ny fandotoana ny tabataban'ny tontolo iainana na tsy mahafeno ny fepetra takian'ny Fanjakana, ny sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana ekolojika mahay na mihoatra ny faritry ny distrika dia handidy azy hanao fanitsiana ao anatin'ny fetra voafetra, ary hametraka sazy amin'ny unit na olona; Raha nisy ny fahalotoana lehibe teo amin'ny tontolo iainana na ny fahasimban'ny tontolo iainana dia didiana izy hampijanona ny famokarana na ny fampiasana azy, na, rehefa eken'ny governemanta vahoaka manana fahefana fankatoavana, hanidy azy io.
Fanekena ny fisorohana sy fanaraha-maso ny fako maloto:
Ny 29 aprily 2020, ny lalànan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina momba ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny fahalotoan'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fako mivaingana fanitsiana fanindroany (hampiharina hatramin'ny 1 septambra 2020), ny tetik'asa fananganana dia mila mamorona andiany feno toerana fisorohana ny fandotoana ny fako, rehefa vita ny zavatra ilaina rehetra tsy miankina amin'ny sehatry ny fananganana hanatanterahana ny fanekena ny fiarovana ny tontolo iainana, tsy mila mihatra amin'ny departemantan'ny fitantanana ny fanekena ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fandinihan-tena, fanitsiana ary toeram-pitsaboana mifandraika amin'ny entona fandrehitra
Zahao ny satan'ny fandidiana, ny fandehanan-tantara, ny fahaiza-mitantana ary ny fahaizan'ny toeram-pitsaboana entona mandrehitra.
1, fizahana entona mandany
* Zahao raha mitombina ve ny fizotran'ny fitsaboana gazy biolojika mitohy?
* Zahao ny fomba fanaraha-maso sy ny mari-pamantarana ny fitaovana fandoroana boiler, jereo ny fizotran'ny fitaovana fandoroana, jereo ny fifehezana dioxide solifara, zahao ny fifehezana oksida azota.
* Zahao ny angovo fandotoana, vovoka ary loharanom-pofona;
* Hamarino raha mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra mivoaka mandoto ny loto ny etona, ny vovoka ary ny fofona;
* Zahao ny fanarenana sy ny fampiasana entona mirehitra;
* Zahao ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana momba ny fitaterana, ny famoahana, ny famoahana entana ary ny fitehirizana ireo gazy misy poizina sy manimba ary vovoka.
2. Fitaovana fisorohana sy fanaraha-maso ny fahalotoan'ny rivotra
* Fanesorana vovoka, famotehana, fandotoana, rafitra fanadiovana loto maloto hafa;
* Fivoahan'ny entona fandrehitra;
* Hamarino raha nanamboatra reraka vaovao ireo mpandoto tany amin'ny faritra voarara ny havizanana vaovao;
* Hamarino raha mahafeno ny fepetra takian'ny fenitry ny fivoahan'ny loto maloto na ny eo an-toerana ny haavon'ny varingarina fanodinana;
* Zahao raha misy lavaka santionany sy sehatra fanaraha-maso ny santionany amin'ny fantsom-panafody
* Hamarino raha napetraka araka ny fepetra takiana ny seranan-tsambo (halavany, seranan-tsamponana, takelaka fanamarihana sns.), Ary raha napetraka sy ampiasaina amin'ny fanaraha-maso an-tserasera araka ny departemanta miaro ny tontolo iainana ny etona ilaina.
3. Loharano famoahana tsy voarindra
* Ho an'ireo teboka famoahana tsy misy fandaminana ny entona misy poizina sy manimba, vovoka sy setroka, raha toa ka avelan'ny famoahana voarindra ny toe-javatra, zahao raha efa nahavita nanitsy sy nampiditra emission voarindra ny singa mpanala ny loto;
* Zahao ny vovoka ao amin'ny tokotanin'ny arina, ny tokotanin'ny akora, ny entam-barotra ary ny vovoka amin'ny fizotry ny famokarana, na efa noraisina ny fepetra hisorohana ny fandotoana vovoka na namboarina araka izay takina ny fitaovana fisorohana vovoka;
* Manaova fanaraha-maso any amin'ny fari-tanin'ny orinasa hijerena ny fandefasana entona tsy voarindra mifanaraka amin'ny fenitra iainana mifandraika amin'izany.
4. Fanangonana sy fandefasana entona maloto
* Ny fanangonana lasantsy maloto dia tokony hanaraka ny foto-kevitry ny "manangona ny vola azo rehetra ary manangona arakaraka ny kalitao" .Ny rafitra fanangonana entona fandrehitra dia tokony hamboarina arakaraka ny toetran'ny entona, ny tahan'ny mikoriana ary ny anton-javatra hafa mba hiantohana ny vokatra fanangonana entona.
* Ny fepetra fanakatonana, fitokana-monina ary ny tsindry ratsy dia tokony horaisina amin'ny fitaovana mamokatra vovoka na gaza manimba.
* Ny entona maloto dia tokony angonin'ny rafitry ny fanangonana ny fitaovana famokarana mihitsy araka izay tratra. Rehefa angonin'ny entona manangona (vovoka) ny entona mandositra dia tokony hodidinina na eo akaikin'ny loharanon'ny fandotoana araka izay azo atao izany mba hampihenana ny faritra suction ary hanamorana ny fisamborana sy ny fifehezana ireo loto.
* Ny entona maloto vokarin'ny rafitra fanangonana rano maloto sy ny tobin'ny tobim-pitsaboana (tanky tany am-boalohany, tanky mifehy, tanke anaerobic, tanke aeration, tanke maloto sns) dia tokony hangonina amin'ny rivotra, ary tokony hisy fepetra mahomby hitsaboana sy hivoahana.
* Tokony hakatona ny toerana fitahirizana fako (fako mampidi-doza) misy akora organika miovaova na fofona miharihary, ary tokony angonina sy entina ary esorina ny entona maloto.
* Ny entona fandotoana voaangona amin'ny rakotra fanangonana gazy (vovoka) dia tokony hoentina any amin'ny fitaovana fanadiovana amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody. Ny fantsom-piraketana dia tokony ampiarahina amin'ny teknolojia famokarana, ary ezahina ho tsotra, mifintina, fantsona fohy, kely toerana.
5. Fitsaboana entona maloto
* Ny orinasam-pamokarana dia tokony hisafidy ny làlan'ny fizotran'ny entona fanatobiana matotra sy azo antoka aorian'ny fandalinana feno ny habetsahan'ny entona fandrehitra, ny firafitra sy ny toetran'ny loto, ny mari-pana sy ny tsindry, sns.
* Ho an'ny entona fako biolojika mifantoka be loatra, ny teknolojia fanarenana (cryogenika) fanarenana sy ny teknolojia fanarenana tosika tosika dia tokony hampiasaina hanodinana sy hampiasa ireo fitambarana organika ao anaty entona fako, ary avy eo ny teknolojia fitsaboana hafa dia tokony hampiasaina hahatratrarana ny fenitry ny famoahana.
* Ho an'ny entona fako biolojika mifantoka, ny teknolojia adsorption dia tokony horaisina mba hamerenana ireo solvents organika na teknolojia fandoroana hafanana aorian'ny fanadiovana, fenitra mivoaka.
* Ho an'ny entona fako biolojika ambany, raha misy ny sandan'ny fanarenana dia tokony hampiasaina ny teknolojia adsorption; Raha tsy misy ny sandan'ny fanarenana, ny teknolojia fandoroana ny fifangaroana adsorption, ny teknolojia fanodinana hafanana voajanahary, ny teknolojia fanadiovana biolojika na ny haitao plasma dia tokony horaisina.
* Ny entona maimbo dia azo diovina amin'ny alàlan'ny teknolojia fanadiovana mikraoba, ny haitao ambany amin'ny maripana ambany, ny teknolojia adsorption na ny absorption, ny teknolojia fandoroana hafanana, sns. Rehefa vita ny fanamasinana dia azo esorina amin'ny fenitra izy io ary tsy hisy fiantraikany amin'ny tanjona fiarovana mora tohina. .
* Amin'ny ankapobeny, ny orinasa simika misy famokarana mitohy dia tokony hamerina na handrehitra entona fandotoana voajanahary azo dorana, raha toa kosa ny orinasa simika misy famokarana miserana dia tokony hampiditra insineration, adsorption na dingana mitambatra ho an'ny fitsaboana.
* Ny entona mandoto vovoka dia tokony hokarakaraina amin'ny alàlan'ny fanesorana vovoka harona, fanesorana vovoka electrostatic na fanesorana vovoka kitapo ho fotony. Ireo vovo indostrialy sy fatana indostrialy dia manome laharam-pahamehana ny angovo madio sy ny fizotran'ny fanadiovana mahomby, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fihenan'ny alàlan'ny loto maloto. .
* Manatsara ny fari-pahaizan'ny automatisation d'exploitation d'exploitation. Ny tobim-pitsaboana manala totozy dia afaka mampiasa fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy, fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy pH ary fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ORP, ny tanky fampidinana dia misy fitaovana fampandrenesana haavon'ny rano, ny dosing mode dia tokony ho dosie mandeha ho azy.
* Ny haavon'ny varingarina fanalefahana dia tokony hapetraka arakaraka ny fepetra takiana amin'ny famaritana. Ny haavon'ny varingarina mandringana dia tsy latsaky ny 15 metatra, ny hidrôzenina sianôida, ny klôro, ny haavon'ny varingarin'ny phosgene dia tsy latsaky ny 25 metatra. Ny fitsaboana amin'ny terminal dia omena seranan-tsambo fitadiavana santionany ho an'ny santionany mora. Mifehy tsara ny isan'ny vovo-drindrin'ny orinasa, ny varingarina entona mandrehitra toy izany koa tokony hampifangaroina.
IV. Fitaovana hanaovana fandinihan-tena, fanitsiana ary fitsaboana ny rano maloto
1, fizahana fotodrafitrasa maloto
* Ny toeran'ny asa, ny toeran'ny asa tantara, ny fahaizan'ny fitsaboana ary ny habetsahan'ny rano voatsabo, ny fitantanana kalitaon'ny rano maloto, ny vokatry ny fitsaboana, ny fitsaboana maloto ary ny fanariana ireo fotodrafitrasa fanadiovana maloto.
* Na nitazona ny birao fandidiana rano fako (fotoana fanokafana sy fikatonan'ny toerana fanariana maloto, mivoaka sy mivoaka ny fako isan'andro, ny kalitaon'ny rano, ny dosie ary ny fikojakojana fikojakojana).
* Hamarino raha feno ny toeram-pandraisana ny vonjy taitra ataon'ny orinasan-tsiranoka maloto, ary raha toa izy ireo afaka miantoka ny fitsabahana, ny fitehirizana ary ny fitsaboana ny rano maloto ateraky ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny tontolo iainana.
2, fanaraha-maso ny fivoahan'ny rano maloto
* Hamarino raha mifanaraka amin'ny lalàna ny toerana misy ny fantsona maloto, manamarina raha mifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika amin'izany ny isan'ireo toeram-pantsakan'ny maloto, jereo raha napetraka mifanaraka amin'ireo fenitra fandotoana fandotoana maloto ny teboka fakana santionany. ny fizarana fandrefesana ny fenitra dia napetraka hanamorana ny fandrefesana ny fivezivezena sy ny hafainganana.
* Na ny famantarana ny fiarovana ny tontolo iainana no famoahana ny tatatra maloto indrindra. Mametraha fitaovana fanaraha-maso an-tserasera sy fanaraha-maso araka ny takiana.
3, famindran-toerana, fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano
* Hamarino ny firaketana momba ny asa raha toa ka misy metatra mikoriana sy fitaovana fanaraha-maso ny loharanon'ny fandotoana;
* Zahao ny kalitaon'ny effluent navoakan'ny asa mba hamenoana ny fepetra takiana amin'ny fenitry ny fivoahan'ny loto na ny firenena na eo an-toerana.
* Zahao ireo maodely sy antsipirian'ny fitaovana fanaraha-maso, metatra ary fitaovana, ary koa ny fanamarinana sy ny fanitsiana azy ireo.
* Zahao ny fomba fanaraha-maso fanaraha-maso sy ny firaketana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano ampiasaina. Ny fanaraha-maso na ny santionany amin'ny toerana dia azo atao raha ilaina izany.
* Zahao ny fanodinana ny ranonorana sy ny tatatra, ary zahao raha mampita ny ranon'orana sy ny fanodinana rano maloto ilay singa mpanala ny loto.
4, ny fampiharana ny fanodinana ny orana sy ny fandotoana
* Apetraho ny tanky fanangonana ranonorana voalohany araka ny fepetra arahana, hahafeno ny fepetra takian'ny orana voalohany;
* Ny tanky fanangonana rano maloto dia apetraka ao amin'ny atrikasa misy rano maloto, ary ny maloto voaangona dia alefa ao anaty toeram-pitsaboana mifandraika amin'ny rano maloto amin'ny alàlan'ny fantsona mihidy;
* Ny rano mangatsiaka dia ahodina amin'ny alàlan'ny fantsona mihidy;
* Ny gullies misokatra dia ampiasaina amin'ny fanangonana ranon'orana. Ny tatatra sy ny dobo rehetra dia amboarina amin'ny alàlan'ny fandrarahana beton, miaraka amin'ny fepetra fanoherana ny seepage na fanoherana ny harafesina.
5. Fanariana rano maloto famokarana sy ranon'orana voalohany
* Ireo orinasa mitsabo sy mamoaka ny rano maloto dia hanangana toeram-pitsaboana rano maloto izay mifanaraka amin'ny fahaizany mamokatra sy ny karazany maloto. Ireo toeram-pitsaboana rano fako dia tokony hiasa ara-dalàna ary afaka mandefa tsara hatramin'ny fenitra;
* Ireo orinasa mandray ny rano maloto dia hametraka fotodrafitrasa fitehirizana izay mifanaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana sy ireo karazana loto. Mihazakazaka ara-dalàna ireo fotodrafitrasa pretreatment ary afaka mahafeno ny fenitry ny fividianana milamina;
* Ireo orinasa ankinina amin'ny fikarakarana rano maloto dia tokony hanao sonia fifanarahana amin'ireo singa manana fahaizana, fankatoavana feno sy fombafomba famindrana ary hametraka kaonty fanariana ankinina.
* Ireo orinasa mahafeno fepetra handray ny maloto dia tsy maintsy mandray ny toeram-pitsaboana maloto ho an'ny fitsaboana maloto ao an-trano
6. Fivoahana ny fivoahan'ny fivoahana
* Raha ny tokony ho izy, ny orinasa tsirairay dia tsy mahazo manangana fantsom-pako iray sy fivoahan'ny ranonorana iray ary mametraka fanaraha-maso ny lavadrano sy ny famantarana.
* Ny toeram-pivoahan'ny rano maloto dia tokony mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanamboarana manara-penitra, mba hahatratrarana "iray miharihary, roa mahay mandanjalanja, telo mety", izany hoe miharihary ny marika fiarovana ny tontolo iainana, mitombina ny fametrahana ny fantson-drano maloto, mitombina ny làlan'ny famoahana ny maloto, mora ny manangona santionany, mora araha-maso ary refesina, mora andraisan'ny besinimaro anjara sy fanaraha-maso ary fitantanana;
* Ireo singa mahafeno ny fepetra ao amin'ny Andininy faha-4 amin'ny fepetra vonjimaika ho an'ny fanaraha-maso sy fitantanana ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy ny loharanom-pahalotoana indostrialy ao amin'ny faritanin'i Jiangsu dia tokony hametraka fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny famoahana ireo loto lehibe arak'izay takiana, ary ny tamba-jotra miaraka amin'ny foibe fanaraha-maso ny Birao miaro ny tontolo iainana.
* Ny gullies misokatra tsy tapaka dia tokony hampiasaina amin'ny famoahana ny ranonorana, ary hametrahana valves vonjy maika.
1. Manana singa efatra amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny fanariana fako mampidi-doza
Drafitra fitantanana fako mampidi-doza: hananganana drafi-pitantanana fako mampidi-doza ny orinasa arakaraka ny drafitra famokarana sy ny toetoetran'ny famokarana sy ny fako, mitarika ny fitantanana ireo fako mampidi-doza mandritra ny taona ary manolotra izany any amin'ny birao fiarovana ny tontolo iainana eo an-toerana mba hametrahana azy.
Drafitra famindrana fako mampidi-doza: manomàna drafitra famindrana fako mampidi-doza arakaraka ny fitakian'ny departemantan'ny fitantanana eo an-toerana.
Famerenana famindrana fako mampidi-doza: fenoy ny duplicate arakaraka ny fepetra takiana sy ny masontsivana.
Boky fitantanana fako mampidi-doza: fenoy ny marina ny fampahalalana rehetra momba ny taranaka, fanangonana, fitehirizana, famindrana ary fanariana fako mampidi-doza arakaraka ny fepetra takian'ny lalàna sy ny lalàna ary ny sampandraharaha fitantanana eo an-toerana ary koa ny fitakiana fitantanana ny fako mampidi-doza.
2. Hatsarao ny rafitra fitantanana tontolo iainana ho an'ny fako mampidi-doza
* Mametraha rafitra fiarovana ny tontolo iainana. Ny orinasa dia hametraka rafitra fiarovana ny tontolo iainana mba hanazavana ny andraikitry ny olona miandraikitra ny singa sy ny mpiasa mifandraika amin'izany.
* Manaraka ny rafitra fanaovana tatitra sy fisoratana anarana. Ny orinasa dia tsy maintsy mamorona drafitra fitantanana ny fako mampidi-doza, mifanaraka amin'ny fepetra voatondron'ny Fanjakana.
* Mamolavola fepetra fisorohana sy drafitra vonjy taitra ho an'ny lozam-pifamoivoizana. Ny orinasa dia handrafitra ny fepetra fisorohana sy ny vonjy taitra mialoha ny loza ary hatolotra ny sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny tontolo iainana ny governemantan'ny mponina eo an-toerana na ambonin'ny faritry ny distrika ho an'ny firaketana.
* Mandamina fiofanana manokana. Tokony hampiofana ny mpiasa ao aminy ny orinasa mba hampahafantatra ny mpiasa rehetra amin'ny fitantanana ny fako mampidi-doza.
3. Mifanaraka tsara amin'ny fepetra takiana amin'ny fanangonana sy fitahirizana
* Tokony hisy toerana sy fitoeran-javatra fitahirizana fako mampidi-doza manokana. Ny orinasa dia tokony hanangana toerana fitahirizana fako mampidi-doza manokana, na mety hampiasa ireo rafitra tany am-boalohany hananganana fotodrafitrasa toy izany. Ny fisafidianana sy ny famolavolana tranokala dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny "fenitra mifehy ny fandotoana. ho an'ny fitehirizana fako mampidi-doza "(fanitsiana GB18597, 2013). Ankoatra ireo fako mampidi-doza izay tsy hydrolyzed na miovaova amin'ny mari-pana sy ny tsindry amin'ny efitrano, ny orinasa dia tokony hametraka fako mampidi-doza ao anaty kaontenera mifanaraka amin'ny fenitra.
* Ny fomba fanangonana sy fitehirizana ary ny fotoana dia tokony mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Ny orinasa dia tsy maintsy manangona sy mitahiry fako mampidi-doza arakaraka ny toetran'ny fako mampidi-doza, ary tsy maintsy mandray fepetra ihany koa hisorohana ny fandotoana ny tontolo iainana. Voarara ny manangona sy mitahiry fako mampidi-doza mifangaro tsy mifanaraka. fananana izay tsy voatsabo tsara, ary voarara ny mitahiry fako mampidi-doza afangaro amin'ny fako tsy mampidi-doza. Ny fitoeram-pako, fonosana ary toerana fitahirizana dia hametraka marika famantarana famantarana fako mampidi-doza arakaraka ny fenitra nasionaly mifandraika sy ny "Fitsipiky ny fampiharana ny fiarovana ny tontolo iainana sary Marka> (Fitsapana) ", ao anatin'izany ny fametahana ny marika na ny marika fampitandremana sns. Ny fotoana fitahirizana fako mampidi-doza dia tsy tokony hihoatra ny herintaona, ary ny fanitarana ny fe-potoana fitehirizana dia tokony eken'ny departemanta misahana ny fiarovana ny tontolo iainana.
4. Manaraka tsara ny fepetra takiana amin'ny fitaterana
Ny orinasa mampiasa fiara fitaterana manokana sy mpiasa manampahaizana manokana dia tokony hanaraka ny fepetra napetraky ny Fanjakana amin'ny fitantanana ny fitaterana entana mampidi-doza, ary fady ny mitondra fako mampidi-doza sy ny mpandeha amin'ny fomba fitaterana mitovy amin'izany. ary ny mpiasa mifandraika amin'izany dia tokony hanaraka ny fepetra voarakitry ny lalàna mifehy ny fitaterana ny entana mampidi-doza amin'ny arabe sy ny lalàna mifehy ny fitantanana fiarovana ireo akora simika mampidi-doza. fahazoan-dàlana hiasa amin'ny entana mampidi-doza. entana, ary fahazoan-dàlana hitaterana entana mampidi-doza amin'ny làlana ho an'ny tsy fiasana fitaterana entana mampidi-doza amin'ny arabe.
Ny fepetra amin'ny fisorohana, ny fifehezana ary ny fiarovana ireo orinasa maloto dia tsy maintsy mandray fepetra hisorohana ny fandotoana ny tontolo iainana ary hanamafisana ny fitantanana sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa, fitaovana ary toerana ampiasaina hitaterana ireo fako mampidi-doza. fitaovana miaraka amin'ny marika famantarana ny fako mampidi-doza. Voarara ny fitaterana fako mampidi-doza mifanohitra izay tsy voaroaka soa aman-tsara.
Vatofantsika fametahana vy mihantona, Fehikibo vatofantsika fototra, Sofina voa, Hex Socket Bolt, Hex Socket Head Bolt, Bolt Coupling Nut,